Maskaxda Maskaxda ee Maskaxda Dadka Abaalmarinta Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Asaasiga Maskaxda
Haddii kaliya waxaan ku dhalaney buug tilmaame ah oo ku saabsan waxa naga dhigaya sax. Warka fiicani waa, marnaba ma soo daahd inaad barato. Waa arrin adag, laakiin sida baabuur, uma baahnid inaan ogaanno wax walba oo ku saabsan mashiinka si loo barto sida loo kaxeeyo si amaan ah.
Pornography internetka maaha sidii loola jeeday waagii hore. Waxay maskaxda ku dhacdaa hab aad u xun. Labada cajaladood ee ugu horeysa ayaa faahfaahinaya sida. Waxay denbiga ka qaadaan arinka iyagoo sharxaya sida ay u nugul yihiin maskaxda, gaar ahaan maskaxda dhallinyarada, inay tahay kicinta madadaalo madadaalo leh oo soo jiidan kara bey'adeena iyo dhaqankeena.
Tani daqiiqad 4 TED hadal oo loo yaqaan "Diidmada Guys"By Professor Stanford Professor Philip Zimbardo wuxuu eegayaa maandooriyaha.
"Imtixaanka Porn Porn”Waa hadal 16 daqiiqo ah oo TEDx ah oo uu jeediyo macalinkii hore ee sayniska Gary Wilson, kaas oo ka jawaabaya loolankii uu dhigay Zimbardo. Waxaa laga daawaday in kabadan 11.7 milyan oo jeer Youtube waxaana loo turjumay 18 luqadood.
Gary wuxuu ku cusbooneysiiyay hadalka TEDx soo bandhigid dheer (1 saac 10 daqiiqo) oo loo yaqaan "Maskaxdaada on Porn- Sidee Porno Internet u Dhacaan Maskaxdaada“. Kuwa iyagu doorbidaya buug soo jiidasho leh oo macluumaad leh eeg Gary Maskaxdaada on Porn: Farshaxanka Internetka iyo Sii-saarka Soogalootiga waxaa lagu heli karaa warqad qoraal ah, ama maqal ah ama Kindle. Daabacaaddii ugu dambaysay waxaa ku jira qayb ka mid ah Ururka Caafimaadka Adduunka ee dhawaan dib loo eegay ee Noocyada Caalamiga ah ee Cudurrada (ICD-11) kaas oo bixinaya baaritaan cusub oo ah 'Cilladaha Dabeecadda Isku Galmoodka ee Isku Khaldan' markii ugu horreysay abid.
Waa maxay farqiga u dhexeeya raaxada iyo farxadda maxaase muhiim u ah? Daawo fiidiyowgaan aadka ufiican ee la yiraahdo “Hacking Mindhicirka Ameerikaanka: Sayniska ka danbeeya Qaadashada Shirkadaha ee Hay'addeena iyo Maskaxda”Oo uu ku takhasusay neuroendocrinologist Dr Robert Lustig si loo ogaado sababta. (32 daqiiqo 42 ilbiriqsi)
Qeybtaan 'aasaasiga maskaxda' Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaalmarinta Abaal-marinta ('Reward Foundation') ayaa kugu dalxiiseysa maskaxda aadanaha. Maskaxdu waxay u soo baxday inay na caawiso sii noolaan iyo horumar. Miisaanka qiyaastii 1.3kg (ku dhowaad 3lbs), maskaxda bini'aadamka waxay ka kooban tahay kaliya 2% miisaanka jirka, laakiin waxay isticmaashaa qiyaastii 20% tamarteeda.
Si aad u fahamto sida maskaxdu u kobcisay inay ka shaqeyso guud ahaan, fiiri Horumarka horumarinta maskaxda. Marka xigta waxaan arki doonaa sida ay u wada shaqeeyaan qeybaha iyadoo la sahaminayo mabaadi'da neuroplasticity, taasi waa sida aan wax u baraneyno oo aan u baranno caadooyinka ay ka mid yihiin horumarinta mukhaadaraadka. Waxaan sidoo kale eegeynaa sida maskaxdu ay ula xiriirto soo jiidashada, jacaylka iyo jinsiga iyada oo ay ugu weyn tahay neurochemicals. Si loo fahmo sababta naloogu waday abaalmarintan, waa muhiim in laga ogaado waxyaabaha ku saabsan nidaamka abaal-marinta. Maxay tahay sababta dhalinyarta dahabiga ah ee qaan-gaarka ah ee aad u xun, xiisaha iyo wareerka? Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan maskaxda dhalinyarada.